2 Android ကိုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာသို့ပြောင်းရန်အက်ပလီကေးရှင်းများ | Androidsis
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android မှယခင်အလုပ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများနှင့်ပိုမိုအလုပ်များလုပ်သည့်အခါတိုင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမည့်အပလီကေးရှင်း ၂ ခုကိုကျွန်ုပ်ထံယူဆောင်လာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာအဖြစ်ပြောင်းလဲပါ.
Android OS ကိုအသုံးပြုနေတုန်းမှာပဲသုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂုဏ်ယူ ၀ မ်းသာမိပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Launcher သို့မဟုတ် Home ၏ graphical interface ၏အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းပါ ၀ င်းဒိုးရှိဤလက်ပ်တော့များနှင့် desktop ကွန်ပျူတာများတွင်အသုံးပြုသောကိုယ်ပိုင်သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်များနှင့်ပိုမိုဆင်တူသောတစ်ခုအတွက်။
တိုးတက်မှုအတွက်ရှုထောင့်များစွာရှိနေသေးသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်နှစ်ခုလုံးကိုမတင်ပြမီ၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပြောပြရမည် ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတစ်ခုအနေဖြင့် Android terminal ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် Bluetooth သို့မဟုတ်ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်, ငါတို့မှာဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးနောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ Wirelles မှတစ်ဆင့်အရံပစ္စည်းများ၏ USB OTG adapter cable ကိုလိုအပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android သည်စံအနေနှင့်လက်ရှိ Android အများစုတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ကိုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်ကူညီမည့်အလွန်ကွဲပြားသော Launchers နှစ်ခု၊ အနည်းဆုံး၎င်းသည်သေးငယ်သည့်အစီအစဉ်သေးသေးလေးများတွင်အသွင်အပြင်နှင့်အသုံးပြုမှုပုံစံအနေဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android နှင့် Landscape mode တွင်အဆင်ပြေစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ရှုခင်းပုံစံသည်အလုံအလောက်ထက်မကပါ။ ဥပမာ Launcher ကဲ့သို့ Nova Launcher ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal ကို Landscape mode တွင် ပိုမို၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် mouse နှင့် keyboard ပါ ၀ င်ရန်လုံလောက်သည်။
ဤ Launcher-type application များကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ရှာသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်ဤအရာဖြစ်သည် သင်၏ Android ကို Landscape mode တွင်အသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည် သို့မဟုတ်ရှုခင်းပုံစံ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနှင့်သင်ကဲ့သို့ပင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပါ.
1.1 Leena Desktop UI ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
2 Pure OS သည်ရိုးရှင်းမှုကို အခြေခံ၍ Leena နှင့်အစားထိုးသည်
2.1 Pure Os ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
Leena Destop UI ကို ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌ဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုး၌ရှာတွေ့နိုင်သည့်အကောင်းဆုံး application တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဆက်သွယ်မှုကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသွင်အပြင်နှင့်အပြန်အလှန်လည်ပတ်မှုပုံစံတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ desktop operating system ။
Windows သို့မဟုတ် MAC windows များနှင့်ရောနှောထားသော MAC Dock ကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိရစေမည့်အသွင်အပြင်တစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏အဓိက desktop ပေါ်တွင် multi-window အစစ်အမှန်ကိုအပြည့်အ ၀ ထောက်ခံသည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Android ရဲ့အဓိက desktop ကနေ Landscape mode မှာလုပ်နိုင်ပါပြီ Windows, MAC သို့မဟုတ် Linux တို့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည် windows ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်သည်, တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့ဒီရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုပြတင်းပေါက်ကခလုတ်တစ်ခုလွတ်သွားအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။
Leena Desktop UI ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
Leena Desktop UI (ဝင်းဒိုး Multi)
Pure OS သည်ရိုးရှင်းမှုကို အခြေခံ၍ Leena နှင့်အစားထိုးသည်
ငါတို့ရှာနေတာက စစ်မှန်သော multi-window အတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိသောပေါ့ပါးသော ၀ င်းဒိုးအခြေခံသောပတ်ဝန်းကျင်အရိုးရှင်းဆုံးသော Android terminal များနှင့်ပင်သဟဇာတဖြစ်သောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုသည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ သန့်ရှင်းသော OS.
Pure OS သည်ရိုးရှင်းသော Dock နှင့်အနည်းငယ်သော configuration option များဖြင့်ဖော်ရွေသော interface ကိုပေးသည်, အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် taskbar တွင်ပေါ်လာသော administrator ၏အမည်နှင့် Launcher ၏မူလနောက်ခံပုံများကိုသာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒါကငါတို့ကိုပါဝါကမ်းလှမ်းတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ၏ desktop ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာနှင့်အတူလိုပဲ Launcher သူ့ဟာသူနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော web browser နှင့်အလုပ်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည် post-it desktop တွင်စံအဖြစ်အမြန်မှတ်စုများကိုကောင်းသော application တစ်ခုသို့မဟုတ် desktop ၏ညာဘက်ရှိကြမ်းတမ်းသော sidebar တစ်ခုအပါအဝင်အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကောင်းမွန်သောပြက္ခဒိန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ Notification Center ရှိလိမ့်မည်။
Pure Os ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
ရေးသားသူ: Umberto Emonds
၀၂:၅၂ Leena Desktop
08:58 စင်ကြယ်သော Os
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android ကိုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာသို့ပြောင်းရန်အက်ပလီကေးရှင်းများ
DOOGEE X5၊ မတူညီသောမော်ဒယ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်